OTU ESI EME KA EZUMIKE-ỌBỤNA ISI NA EXCEL - EXCEL - 2019
Nkewa na-eme na Microsoft Excel
Otu n'ime usoro akụ na ụba na akụ na ụba nke ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla bụ iji chọpụta njedebe ya. Ngosipụta a na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke mmepụta ọrụ nke nzukọ ahụ ga-aba uru ma ọ gaghị ata ahụhụ. Excel na-enye ndị ọrụ ọrụ ndị na-eme ka nkọwa nke njirimara a dị ukwuu ma gosipụta nsonaazụ ngosi. Ka anyị chọpụta otú e si eji ha eme ihe mgbe ịchọtara oge ezumike-ọbụnadị na otu ihe atụ.
Ihe kachasị mkpa nke nkwụsịtụ bụ ịchọpụta uru nke mmepụta nke ego (uru) ga-abụ efu. Nke ahụ bụ, site na mmụba na mpịakọta mmepụta, ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite igosi uru nke ọrụ ahụ, yana ọnụ - enweghị nchebe.
Mgbe ị na-atụle nkwụsịtụ-ọbụnadị igosi na ị ga-achọ ịghọta na akwụ ụgwọ niile nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike kewaa na agbanwe. Òtù nke mbụ anaghị adabere na olu nke mmepụta ma agbanwe agbanwe. Nke a nwere ike ịgụnye ụgwọ ọnwa maka ndị ọrụ nhazi, ụgwọ nke ịgbazite ụlọ, njedebe nke ụlọ akụ, wdg. Mana ugwo ugwo na-adabere na olu nke mmeputa. Nke a, nke mbụ, kwesịrị ịgụnye ụgwọ nke ịzụta ihe onwunwe na ume, ya mere a na-egosipụ ụdị ego a n'otu mpaghara nke mmepụta.
Ebumnuche nke nkwụsịtụ-ọbụna isi na njikọrọ nke ụgwọ efu na agbanwe. Ruo mgbe e mepụtara ụfọdụ akwụkwọ mmepụta, ọnụahịa a na-akwụ ụgwọ bụ nnukwu ego na ọnụahịa zuru oke nke mmepụta, ma site na mmụba nke olu, òkè ha dara, ya mere ọnụahịa nke ngwaahịa ndị ahụ mepụtara. N'okwu nkwụsịtụ, ọbụna ọnụahịa nke mmepụta na ego sitere na ire ere ma ọ bụ ọrụ hà. Site n'inwekwu mmụba na mmepụta, ụlọ ọrụ amalite ịme uru. Ọ bụ ya mere ọ dị oke mkpa iji chọpụta mkpụrụ edemede na-emepụta ihe na-eme ka oge izu ike ahụ ruru.
Ntughari ihe ọbụla
Anyị ga-agbakọọ ihe ngosi a site na iji ngwaọrụ nke Excel, ma wuokwa otu eserese nke anyị ga-eji akara aka-ọbụna isi. Maka nchịkọta anyị ga-eji tebụl nke akọwapụtara data mbụ nke ọrụ ụlọ ọrụ ahụ:
Ọnwụ akwụ ụgwọ;
Ọnụ ọgụgụ na-agbanwe agbanwe maka otu nke mmepụta;
Ọnụahịa na-ere ere nke ọ bụla nke mmepụta.
Ya mere, anyị ga-agbakọ data, dabere na ụkpụrụ ndị e gosiri na tebụl dị na foto dị n'okpuru ebe a.
Anyị na-ewu tebụl ọhụrụ dabeere na tebụl isi iyi. Mpempe akwụkwọ mbụ nke tebụl ọhụrụ bụ ọnụọgụ nke ngwaahịa (ma ọ bụ nza) nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara. Nke ahụ bụ, akara nọmba ga-egosi ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa. Na kọlụm nke abụọ bụ uru nke efu efu. Ọ ga-adị ka anyị na mpaghara niile. 25000. Mbadamba nke atọ bụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ụgwọ akwụ ụgwọ. Nke a bara uru n'ahịrị nke ọ bụla ga-ahazi ngwaahịa nke oke nke ngwongwo, ya bụ, ọdịnaya nke sel dị na kọlụm mbụ, site na 2000 rubles.
Na kọlụm nke anọ bụ ngụkọta ego niile. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ nke eriri nke kwekọrọ na kọlụm nke abụọ na nke atọ. Na kọlụm nke ise bụ ego niile. A na-agbakọta ya site n'ịba ụba ego (4500 r.) na nọmba ọnụ ha, nke e gosipụtara na eriri nke kwekọrọ na kọlụm mbụ. Akụkụ nke isii nwere akara uru ntanetị. A na-agbakọta ya site na iji wepu ego zuru ezu (kọlụm 5) ego ole a ga - efu (kọlụm 4).
Nke ahụ bụ, n'ahịrị ndị ahụ nwere uru na-adịghị mma na sel ndị kwekọrọ na kọlụm ikpeazụ, enwere ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na ebe ndị ahụ ga-egosi 0 - a ghaghị ịkọwa okwu nkwụsịtụ, na n'ebe ndị ọ ga-adị mma - a na-ahụ uru na ọrụ nke nzukọ ahụ.
Maka idoanya, jupụta 16 ahịrị. Kọlụm nke mbụ ga-abụ ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa (ma ọ bụ nza) si 1 ruo 16. Ogidi ndị na-esonụ ga-ejupụta dị ka algọridim nke e kwuru n'elu.
Dịka ị na-ahụ, a na-ebute oge nkwụsịtụ na 10 ngwaahịa. Ọ bụ mgbe ahụ ka ụtụ ego (45,000 rubles) dị ka ụgwọ mmefu niile, ego nrite dị nhata 0. Kemgbe a tọhapụrụ ngwaahịa iri na otu, ụlọ ọrụ ahụ egosipụtawo ọrụ bara uru. Ya mere, n'ọnọdụ anyị, njedebe-ọbụnadị na nhazi nhazi 10 nkeji, na ego - 45,000 rubles.
Mgbe e mechara tebụl ebe a na-agbakọta isi ihe ọbụla, ị nwere ike ịmepụta eserese ebe a ga-egosipụta ihu a. Iji mee nke a, anyị ga-arụrịrị eserese na eriri abụọ na-egosi ụgwọ na ego nke ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ikuku nke usoro abuo a ga-abughi isi ihe. Tinyere na axis X eserese a ga-abụ ọnụ ọgụgụ nke ụyọkọ ngwongwo, na ntụgharị Y ego ego.
Gaa taabụ "Tinye". Pịa na akara ngosi ahụ "Ederede"nke a na-etinye na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Atụmatụ". Anyị nwere nhọrọ nke ọtụtụ ụdị eserese. Iji dozie nsogbu anyị, ụdị ahụ dị mma. "Dot na oghere dị nro na akara"wee pịa ihe a na ndepụta. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na achọrọ, ịnwere ike iji ụfọdụ ụdị eserese ndị ọzọ.
A na-emeghe ebe ederede efu na anyị. Ọ ga-ejupụta na data. Iji mee nke a, pịa nri na mpaghara ahụ. Na menu rụọ ọrụ, họrọ ọnọdụ "Họrọ data ...".
Mmalite nhọrọ ntinye data amalite. E nwere ngọngọ n'akụkụ aka ekpe ya "Ihe nke akụkọ (ahịrị)". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Tinye"nke dị na mkpọchi ahụ.
Tupu anyị mepee windo a na-akpọ "Gbanwee ahiri". N'ime ya, anyị ga-egosiputa nhazi nke nkesa data, dabere na nke otu n'ime esemokwu ahụ ga-ewu. Iji malite na anyị ga-ewu usoro nke eji emefu ego niile. Ya mere, n'ubi "Aha Aha" banye nbanye keyboard "Ego niile".
N'ọhịa Ụkpụrụ X kọwaa nhazi nke data dị na kọlụm "Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwongwo". Iji mee nke a, debe cursor na mpaghara a, wee mechie bọtịnụ aka ekpe ahụ, họrọ kọlụm kwekọrọ na tebụl ahụ. Dika ị nwere ike ịhụ, mgbe omume ndị a gasịrị, a ga-egosipụta nhazi ya na windo nke edezi.
Na mpaghara na-esote "M na-emetụta" kwesịrị igosi adreesị kọlụm "Ego niile"nke data anyị chọrọ dị. Anyị na-eme ihe dị ka algorithm ahụ dị n'elu: tinye onye ọbụla n'ọhịa ma họrọ mkpụrụ ndụ nke kọlụm achọrọ na bọtịnụ akaekpe aka ekpe. A ga-egosipụta data ahụ n'ọhịa.
Mgbe a rụchara akara ahụ n'elu, pịa bọtịnụ ahụ. "OK"etinye na ala nke windo ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-alaghachi na windo nhọrọ data. Ọ dịkwa mkpa ka ị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe nke a gasịrị, akwụkwọ ahụ ga-egosipụta eserese nke ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ugbu a, anyị aghaghị ịmepụta usoro ego niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Maka nzube ndị a, pịa aka nri na mpaghara nke eserese ahụ, nke nwere ugwo nke ụgwọ niile nke nzukọ ahụ. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ ọnọdụ "Họrọ data ...".
Mmiri nhọrọ ntinye data amaliteghachi, nke ị ga - eji pịa bọtịnụ ọzọ. "Tinye".
Agbanwe windo obere mgbanwe windo meghere. N'ọhịa "Aha Aha" oge a anyị dere "Ego Enweta".
N'ọhịa Ụkpụrụ X kwesịrị itinye nhazi nke kọlụm ahụ "Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwongwo". Anyị na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ anyị tụlere mgbe anyị na-ewu nkwụnye ego zuru ezu.
N'ọhịa "M na-emetụta"N'otu ụzọ ahụ, anyị na-edepụta nhazi nke kọlụm ahụ. "Ego Enweta".
Mgbe ịmechara omume ndị a, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
A na-emechi windo nhọrọ data data site na ịpị bọtịnụ ahụ. "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-egosipụta usoro ego zuru oke na ụgbọelu nke mpempe akwụkwọ ahụ. Ọ bụ isi ihe na-eme ka ọnụọgụ nke ego na ụtụ ego ga-abụ ihe nkwụsịtụ-ọbụna isi.
Ya mere, anyị enwetala ihe mgbaru ọsọ nke ịmepụta oge a.
Ihe omumu: Otu esi eme ihe osise na Excel
Dịka ị pụrụ ịhụ, isi nkwụsị nke a na-adabere na mkpebi nke mmepụta, nke ọnụahịa a ga-akwụ ụgwọ niile. E gosipụtara nke a, na -emepụta iwu nke ụgwọ na ụtụ, na ịchọta ebe ha ga-esi na-agagharị, nke ga-abụ ihe nkwụsịtụ. Iduzi ntụgharị dị otú ahụ bụ isi n'ime nhazi na ịhazi atụmatụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla.